﻿4ပါဝင်ပစ္စည်းများ Peach ဖက်ထုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
တစ် crock အိုး၌ကြက်သား ala ရှငျဘုရငျကို
4 ပါဝင်ပစ္စည်းများ Peach ဖက်ထုပ်
၄ ပါဝင်သောမက်မွန်ခရမ်းချဉ်သီးသည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒီအရသာရှိတဲ့အချိုပွဲဟာမီးတောက်ထဲမှာစုစည်းထားတာဖြစ်သလို၊ အရိုးရှင်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများသာလိုအပ်ပါတယ်။ ချိုမြိန်သောအရည်ရွှမ်းသည့်မက်မွန်သီးတစ်လုံးသည်မုန့်ညက်ထုပ်တွင်ထုပ်ပြီးအညိုရောင်အထိဖုတ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရေခဲမုန့်တစ် sc ကပ်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်!
မြေပြင်အမဲသား crock အိုးနှင့်အတူ rotel သို့ကျဆင်းလာစာရွက်
မီးဖို၌မုန့်ဖုတ်သည့်နွေးထွေးသောမက်မင်သီးများ၊ သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုမယုံနိုင်လောက်သည့်အနံ့များဖြင့်ဖြည့်စွက်ပြီး၎င်းသည် vanilla ရေခဲမုန့်ကြီးတစ်လုံးဖြင့်နွေးထွေးစွာထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သူတို့သည်နှစ်သိမ့်မှု၊ ဤစာရွက်သည်မိသားစုနှင့်အတူအိမ်တွင်လွယ်ကူသောအချိုပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏နောက်အိုးသို့မဟုတ် BBQ ဖြစ်သည့်သင်၏သွားရည်ချက်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏မီးဖိုချောင်ဖုတ်ခြင်းတွင်တစ်နေ့လုံးကုန်လွန်ခဲ့သကဲ့သို့ဤအရာများသည်အရသာရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း၊ ဤစာရွက်သည်သင့်မိသားစုနှင့်အတူအချိန်အနည်းငယ်ပျော်မွေ့ရန်အချိန်များစွာပေးလိမ့်မည်။ ခြစ်ရာကနေမုန့်စိမ်းကိုလုပ်မယ့်အစား, ဒီစာရွက်ကဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်အောင်တိုတောင်းတဲ့ဖြတ်အတွက်လခြမ်းလိပ်ကိုအသုံးပြု! မက်မွန်သီးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤအစာအတွက်အရသာရှိသည့်ငံပြာရည်ကိုအထောက်အကူပြုရုံသာမကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအားရကျေနပ်မှုကိုလည်းဖြစ်စေသည်။
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilssonချိုမြိန်သောအရည်ရွှမ်းသည့်မက်မွန်သီးတစ်လုံးသည်မုန့်ညက်ထုပ်တွင်ထုပ်ပြီးအညိုရောင်အထိဖုတ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောရေခဲမုန့်တစ် sc ကပ်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ လခြမ်းလိပ်နိုင်ပါတယ် ၈ ခု
▢၁ အလင်းရည်အတွက်ရှက် Peach နိုင်ပါတယ် ဖျော်ရည်သီးသန့်
▢½ ခွက် ထောပတ် အရည်ပျော်
▢နှစ် ဇွန်း သစ်ကြံပိုးသကြား
လခြမ်းလိပ်များကို unroll လုပ်၍ မက်မွန်တစ်ခုစီကိုလခြမ်း၌တလိမ့်။ 8 × 8 မုန့်ဖုတ်ပန်းကန်သို့မဟုတ် casserole ပန်းကန်ထဲမှာထားပါ။
အရည်ပျော်ထားသောထောပတ်ကို pe ထိန်းသိမ်းထားသည့်မက်မွန်ရည်ခွက်နှင့်ရောစပ်ပါ။ လိပ်များကိုလောင်း။
သစ်ကြံပိုးသကြားနှင့်ဖြန်း။ မိနစ် ၃၀ မှ ၃၅ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်အညိုရင့်လာသည်အထိဖုတ်ပါ။
ပေးထားသောအာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
သော့ချက်စာလုံးမက်မွန် dumplings သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
နွေရာသီတွင်ရာသီဥတုပူလာသည်နှင့်အမျှဤအချိုပွဲသည်အရသာရှိခဲ့လျှင်နေပူမှည့်သောနွေရာသီတစ်ရက်လိုအရသာရှိသလောက်အရသာရှိသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည်ဤ Peach Dumplings စာရွက်ကိုအမြဲတောင်းဆိုသည်။ ဤစာရွက်၏ရိုးရှင်းမှုသည်သူတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှငြင်းပယ်ကြောင်းသေချာစေသည်။
မှပြင်ဆင်လိုက်ပြီစာရွက် OMG ချောကလက်အချိုပွဲများ
2 ပါဝင်ပစ္စည်းများ Apple Pie Dumplings
ဇောက်ထိုးဒိန်ခဲ Apple Pie
သင်ဂေါ်ဖီထုပ်၏ ဦး ခေါင်းအေးခဲနိုင်ပါတယ်
ချောကလက်မှော် cookie အရက်ဆိုင်အားဖြင့်သေခြင်း
Air Fryer ဟမ်ဘာဂါ
Butternut Squash, ကြက်သားနှင့်တောရိုင်းဆန်ဇီယာ
ခရစ္စမတ် M & M ကွတ်ကီးများ
အေးစက်နေတဲ့ Root ဘီယာ Float Pie